~ Witch83၏ စိတ်ကူးကမ္ဘာ ~: 2011
Dictionary ထဲမှာ အဲ့လို ဖတ်ဖူးတာပဲ။
Any sort of relationship requires Commitment from each party တဲ့....
စာအုပ်ထဲမှာ အဲ့လို ဖတ်ဖူးတာပဲ။
လူတွေ အမျိုးမျိုး အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်နေကြတာပဲ။
အလွယ်ကူဆုံး အနီးစပ်ဆုံး စကားလုံးတစ်ခုကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရွေးလိုက်တယ်။ Endearmentတဲ့ ...
Love ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ
Commitment ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံး လိုအပ်လာတဲ့အခါ....
နင်.. လိုချင်တာကို ငါမသိ...
ဒီလိုနဲ့ ... အငြင်းပွားမှုတွေ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကာကွယ်မှုတွေ၊ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြစ်တင်မှုတွေ
ဒါတွေအားလုံး ပြီးတဲ့နောက်မှာ... ငါ.. နင့်ကို ပြောချင်တာကတော့....
ဒီ နှစ်ခုကြိုက်သလို၊ လိုသလိုသုံးပေါ့ကွယ်။
Posted by witch83 at 11:55 PM3comments:
Labels: ကဗျာ, ရေးမိသမျှ
Though we don't speak out loving things to each other
She is really....
A chest to lean
A love to to be seen
Between us, there are....
And I thank you very much ....
for the closeness we've enjoyed ~~~
Well, finally, I do want to say" I LOVE YOU SO MUCH" (^_^)
Happy Mother's Day 2011 (မေလ ဒုတိယပတ်တနင်္ဂနွေနေ့၊ 08th May 2011)
အမေများအားလုံး .... ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာဖြင့် မိမိတို့ခန္တာဝန်ကို ကောင်းစွာ ရွက်ဆောင်နိုင်ကြပါစေ။ ။
Remark : Ain't sure if this one sounds likeapoem or not.
Anyway, I wrote this , dedicated to my mom asagift for tomorrow.
07th May 2011 ( 11:40PM, GMT+8) To Continue Reading
Posted by witch83 at 11:47 PM No comments:
Labels: Dedicated Words, My Diary, ကဗျာ
စာရေးဆရာ နေနော် ရဲ့ ဝတ္ထုတိုကို ပြန် share ထားတာပါ။ ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ ဝထ္တုတိုလေးပါ။ ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
လမ်းတဝက်ကျော်လျင် ဘယ်ဘက်အခြမ်းကို သတိထား၍ကြည့်ပါ။
အုတ်ကျွတ်နီနီမိုးထားသည့် နှစ်ထပ်အိမ်မြင့်ကြီးကို တွေ့ပါက ထိုအိမ်သည် သွားဆရာဝန်၏ အိမ်ဖြစ်ပြီး အောက်ထပ်ဧည့်ခန်းသည် ၄င်း၏သွားစိုက်ဆိုင်ပင်ဖြစ်သည်။
ထိုလမ်းထဲသို့ သူမကြာခဏရောက်လေ့ရှိသော်လည်း သွား ဆရာဝန်အား နှစ်ကြိမ်သာ တွေ့မြင်ခဲ့ဖူးပါသည်။ တစ်ကြိမ်မှာ... နေသာချိန် ၄င်း၏ပစ္စည်းကရိယာများ နေပူထုတ်လှန်းစဉ်ကဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်ကြိမ်ကတော့ ၄င်း၏ခွေးပုလေးအား ထွက်ကျောင်းစဉ်က ဖြစ်သည်။ နှစ်ကြိမ်စလုံး စွပ်ကျယ်လက်တို အဖြူကိုသာ ဝတ်ဆင်ထားပြီး ငွေရောင်ဆံပင်ဖြူဖြူ ၊ မုတ်ဆိတ်ဖြူဖြူနှင့် ရွှေကိုင်းမျက်မှန်ခပ်သေးသေး ဝတ်ဆင်ထားသော ၄င်း၏ပုံက ဆရာဝန်နှင့် မတူဘဲ ကဗျာဆရာ ၊ သို့မဟုတ် ဂီတပညာရှင်နှင့် ပို၍တူသည်ဟု သူထင်ခဲ့မိ၏။
ရက်ကွက်ထဲမှ လူများ၏အဆိုအရ သွားဆရာဝန်သည် အနေအေးကာ စကားနည်းပြီး ရံဖန်ရံခါ တယောထိုး၍ သော်၎င်း၊ သီချင်းညည်း၍သော်၎င်း၊ ငြိမ်ငြိမ်ဆိတ်ဆိတ်နေတတ်သော အသက်ခြောက်ဆယ်ကျော် လူတစ်ဦးဖြစ်၏။
၄င်း၏ထူးခြားချက်မှာ သွားနုတ်ရန် လာသူများအား “နုတ်မှာသေချာလား” ဟုမေးတတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အမေးခံရသူက ဇဝေဇဝါဖြစ်နေပါက “စဉ်းစားပါအုံးလေ” ဟုဆိုကာ အလွယ်တကူ ပြန်လွှတ်တတ်၏။
အရပ်ထဲမှ သွားနာသူများ၊ သွားကိုက်သူနှင့် သွားပြန်စိုက်ချင်သူ အားလုံး ထိုဆရာဝန်ထံ ရောက်ရမြဲ ဖြစ်သော်လည်း သူကတော့ ကံကောင်းထောက်မစွာ အချိန်အတန်ကြာ လွတ်မြောက်နေခဲ့၏။ သွားကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်လျင် ထူးထူးခြားခြား ဂရုစိုက်ခြင်းကြောင့် မဟုတ်ဘဲ သာမန်ကံကောင်းမှု ကြောင့်သာဖြစ်သည်။
ထိုကံကောင်းမှုသည် လွန်ခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ် အတွင်းကပင် ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သူ၏ သွားတစ်ချောင်းသည် မခံမခရပ်နိင်အောင် ကိုက်ခဲနေခဲ့ပြီး ထိုကိုက်ခဲမှုကြောင့် ပါးတစ်ခြမ်းပင် ရောင်ကိုင်း နေပြီဖြစ်၏။
သေချာပါတယ်.... သူ... သွားဆရာဝန်ဆီကို သွားရတော့မှာပါ။
နေပါအုံး... အဲဒီသွားက ဘယ်တုံးကတည်းက ကိုက်နေတာပါလိမ့်။
နေ့ရက်တို့ကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်သော်လည်း သူ၏မှတ်ဥာဏ်တို့က မကောင်းလှပါ။ ဇနီးသည်နှင့် စကားမများခင်အထိတော့ ထိုသွား မကိုက်သေးဟု ဝိုးတဝါးမှတ်မိလာ၏။
ဇနီးသည်..... သူ့ထက်အသက်များစွာငယ်သော အမျိုးသမီးအား ဇနီးအဖြစ် လက်ထပ်ယူခဲ့သည်မှာ သိပ်မကြာလှသေး။ ၄င်းနှင့် လက်ထပ်ပြီးခါစ သူ၏နေ့ရက်တို့မှာ ရွှေရောင်တောက်အခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းမှာတော့ မကြာခဏဆိုသလို သူမနှင့် စကားများခဲ့၏။ စကားများရခြင်း အကြောင်းမှာ သူတို့နှစ်ယောက်၏ အသက်အရွယ်ကွာခြားမှု ဖြစ်နိင်သလို၊ နုပျိုငယ်ရွယ်လွန်းသော သူမအပေါ် သူ၏ အစိုးရိမ်လွန်မှုကြောင့်လည်း ဖြစ်နိင်ပါသည်။
ယခုတော့...သူ့သွား၏ အခြေအနေက မနှုတ်လျင် မဖြစ်လောက်အောင် ဆိုးဝါးနေပြီဖြစ်၏။ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးများ၊ တစ်ပွဲထိုးဆေးမြီးတိုများနှင့် မသက်သာတော့သည့် အဆုံးမှာတော့ သွားဆရာဝန်နှင့် ပြရန် သွားစိုက်ဆိုင် ရှိရာသို့ သူထွက်လာခဲ့တော့သည်။
မြေနီလမ်းအတိုင်းလျှောက်လာရာမှ ဆရာဝန်၏ အိမ်ဝိုင်းထဲသို့ ချိုးဝင်လိုက်၏။ နှစ်ထပ်ပျဉ်ထောင်အိမ် မြင့်မြင့်ကြီး၏ အဝင်တံခါးဝဘေး၌ ဆရာဝန်၏ အမည်နှင့် ၄င်းယူခဲ့သော ဘွဲ့တို့ကို ရေးထိုးထားသည့် ကြေးဝါ ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခု ချိတ်ထားပြီး ထိုဆိုင်းဘုတ်မှာ ဆွဲဆောင်မှုမဲ့စွာ မှေးမှိန်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်သည် ခေတ်နှင့် ရင်ဘောင်တန်းရန် စိတ်မပါတော့ဟု ယူဆရပါသည်။
သွားစိုက်ဆိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်ရမည့် ဧည့်ခန်းအတွင်း ရောက်ရှိသွားချိန်မှာတော့ သူ့အထင်မှန်ကန်ကြောင်း သေချာသွားတော့သည်။ လူနာစမ်းသပ်သည့်ခုံမှာ သားရေများပေါက်ပြဲလျက် ဟောင်းနွမ်းနေပြီ ဖြစ်သလို ကရိယာများမှာလည်း ခေတ်နောက်ကျနေပြီဖြစ်၏။ အဆိုးဆုံးမှာ အရိုးစု၏ လက်တစ်ဘက်နှင့်တူသော လူနာကြည့်သည့် မီးဖြစ်သည်။ ဓါတ်ကြိုးများ တိုးလိုးတွဲလောင်း ထိုးထွက်နေပြီး၊ ပေါက်ပြဲသည့် နေရာများအား ပလာစတာများ၊ တိတ်များနှင့် ရစ်ပတ်ထားပုံမှာ အသည်းယားစရာပင် ကောင်းလှပါသည်။
ဆွဲဆောင်မှုကင်းမဲ့လှသော သွားစိုက်ဆိုင် အခင်းအကျင်းအား သူငေးကြည့်နေစဉ်မှာပင် နောက်ဖေးခန်းဆီမှ ခြေသံတရှပ်ရှပ်နှင့်အတူ ဆရာဝန်သူ့မြင်ကွင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသည်။ ထုံးစံအတိုင်း စွပ်ကျယ်အင်္ကျီလက်စကကို ဝတ်ဆင်းထားသော ဆရာဝန်သည် အနီးကပ်မြင်တွေ့ရသော အခါ၌ သူမျှော်လင့်ထားသည်ထက်ပင် ပိုမို အိုမင်းလှပါသည်။ ရွှေကိုင်းမျက်မှန် အနောက်မှ မျက်လုံးအစုံမှ ဖော်ရွေသော်လည်း မသင်္ကာရိပ်တို့ အနည်းငယ်ရောယှက်နေသလို ထင်ရ၏။
သူ့အား ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး အကဲခတ်ပြီးနောက် ၄င်းက လှမ်းမေးသည်။ အသံ၏ ဆွဲဆောင်မှုမှာ ဈေးသည် တစ်ယောက်၏ ဈေးခေါ်သောအဆင့်ထက် မပိုပါ။ သူခပ်ဆိုင်းဆိုင်း ခေါင်းညိတ်လျက် ပြန်ပြောလိုက်သည်။
“ ကျွန်တော် သွားနုတ်ချင်လို့ပါ ”
“ သွားနုတ်ချင်တာလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။”
“ သွားကိုက်နေလို့ ဆရာ။”
“ ကိုက်ရုံပဲလား။ အဲဒါကြောင့် နုတ်ချင်တာလား။”
“ နုတ်လိုက်ရင် သက်သာသွားမလားလို့ပါ”
“ ဟုတ်ပြီလေ။ ဖြစ်နိင်မဖြစ်နိင် သေချာအောင် အရင်ကြည့်ကြတာပေါ့”
“ ဒီခုံပေါ်ကြွပါ။ ပါးစပ်လေးဟထား။ ပြီးတော့..ဘယ်သွားက ကိုက်တာလဲ ကျုပ်ကိုပြပါအုံး။”
အလွတ်ကျက်ထားသော သင်ခန်းစာများအား ရွတ်ပြနေသည့် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပမာ အဆက်မပြတ်ပြောရင်း မှန်အသေးလေး တပ်ထားသော သွားကြည့်ကရိယာအား ဆရာဝန်က လှမ်းယူလိုက်သည်။ ထို့နောက် သူ့နားသို့ တိုးကပ်လာပြီး စက်မောင်းတံသဖွယ် မီးလုံးအားဖွင့်ကာ သွားကို စတင်စစ်ဆေးလေသည်။ ကိုက်ခဲနေသော သွားအား အတန်ကြာစစ်ဆေးပြီးနောက် ဆရာဝန်က မေး၏။
“ ဖြစ်တာကြာပြီလား ”
“ လေး- ငါးရက်တော့ ရှိပြီ။”
“ အဲဒီသွားကို နုတ်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့။ ခင်ဗျားသွားနုတ်ချင်တာ သေချာရဲ့လား။”
ဆရာဝန်၏ တလေးတနက်မေးခွန်းအား သူခပ်သွက်သွက် ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်သည်။ ပျောက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဆရာ။ အဲ့ဒီသွားကို နုတ်ပစ်လိုက်ရင် ကိုက်ခဲနေတာတွေ ပျောက်သွားမယ် မဟုတ်လား....ဟု သူမေးတော့ ဆရာဝန်က ခပ်ဆိုင်းဆိုင်းဖြစ်သွားပြီး သူ့အားဇဝေဇဝါ လှမ်းကြည့်သည်။ ပြီးမှ ခေါင်းတစ်ချက် ဆတ်ခနဲညိတ်လျက်....
“ အင်း...အဲဒီသွားက ကိုက်တာသေချာရင်ပေါ့ ”
“ ကျွန်တော့်ကို ဒုက္ခပေးနေတာပေါ့ အဲ့ဒီသွားပဲဆရာ”
“ ဟုတ်ပြီလေ။ ဒါဖြင့်လည်း ကျွန်တော်တို့ သူ့ကို နုတ်ပစ်လိုက်ကြတာပေါ့”
ဆုံးဖြတ်ချက်ကျပြီး သွားချိန်မှာတော့ ဆရာဝန်၏ လေးကန်ကန် အမူအရာတို့က ကွယ်ပျောက်ကာ ဖြတ်လက်သွက်လက်လာသလို သူထင်မိ၏။ ဆေးထိုးအပ်နှင့် ထုံဆေးကို စုပ်ယူနေချိန်၌ လေတစ်ချက်ပင် ခပ်တိုးတိုး ချွန်လိုက်ပါသေးသည်။
ထို့နောက်... သူ့ဘက်သို့ ပြန်လှည့်လာပြီး နုတ်မည့်သွား၏ အပေါ်ဘက်သွားဖုံးထဲသို့ အပ်ကို ထိုးစိုက်ကာ ထုံဆေးထိုးလိုက်ပြီးနောက် နာရီကို တစ်ချက် လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။
“ ကဲ.. ထုံဆေးရဲ့ အာနိသင်ကို စောင့်ကြတာပေါ့”
“ ဟုတ်ကဲ့.. ဒါနဲ့စကားမစပ် ဆရာ့ကြည့်ရတာ ပိုပြီးတက်ကြွလာသလိုပဲနော်”
“ ဟုတ်လား။ ခင်ဗျားရိပ်မိလိုက်သလား၊ အင်း... ကျွန်တော်ကတော့ သွားနုတ်ရတာကို ပျော်တယ်လေ”
“ တကယ်ကိုက်ခဲနေတဲ့ သွားတစ်ချောင်းကို နုတ်ရတဲ့အခါမျိုးပေါ့။ သွားတစ်ချောင်းဟာ မကြာခဏ ကိုက်တတ်နာတတ်လာပြီဆိုရင် လူကို အကျိုးမပြုတော့ဘူး။ သူ့ကိုဆက်ထားလည်း ဒုက္ခပေးရုံကလွဲပြီး ဘာမှအကျိုးမရှိတော့ဘူး။ အဲ့လို အခြေအနေမျိုးမှာ အဲ့ဒီသွားကို နုတ်ပစ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပဲ ”
ဆရာဝန်က သွားနုတ်ဟန်ပင် စိတ်ပါလက်ပါ လုပ်ပြနေသေး၏။ ၄င်း၏ပုံက သွားအကြောင်းပြောနေခြင်းနှင့် မတူဘဲ ရန်သူတစ်ယောက်အကြောင်း ပြောခြင်းနှင့်ပင် ပို၍တူနေသေးတော့သည်။
“ စိတ်မရှိပါနဲ့ဆရာ။ ဆရာ့စကားထဲမှာ တကယ်ကို ကိုက်တဲ့သွားတို့၊ ကိုက်တာသေချာရင်တို့.. ခဏခဏ ပါနေတော့ တကယ်မကိုက်ဘဲ ကိုက်ချင်ယောင်ဆောင်တဲ့သွားကော ရှိလို့လားဆရာ။”
“ ကိုက်ချင်ယောင်ဆောင်တဲ့သွား။ ဟုတ်လား ရှိပြီလားကိုယ့်လူရယ်။ အသေအချာကို ရှိတာပေါ့။ သွားကိုက်တဲ့ ဆယ်ကြိမ်မှာ ကိုးကြိမ်ဟာ တကယ့်သွားက ကိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်က ကိုက်တာ....”
“ စိတ်ကကိုက်တာ .... ဟုတ်လားဆရာ။”
သူတအံ့တသြမေးလိုက်တော့ ဆရာဝန်က ၄င်း၏ ငွေရောင်ဖွေးဖွေးဖြူနေသော မုတ်ဆိတ်တို့အား ပွတ်သပ်လျက် ခေါင်းညိတ်လေသည်။
“ မပြေလည်မှုတွေပေါ့။ ဘဝရဲ့ မပြေလည်မှုတွေက ကိုက်တတ်တဲ့ သွားသဏ္ဍာန်ဟန်ဆောင်ပြီး လူကို ဒုက္ခပေးနေတော့တာပဲ။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အထူးသဖြင့်တော့...အိမ်ထောင်ရေးပေါ့။ လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွားဆိုတာ ကိုယ့်လူလည်း ကြားဖူးမှာပါ။ တကယ်တော့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ သွားတစ်ချောင်းပဲ။ ကိုယ့်မိန်းမဟာ ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင် သူဟာ ကိုက်တတ်တဲ့ သွားလိုမျိုး ကိုယ့်ကို တဆစ်ဆစ်ဒုက္ခပေးနေတော့တာပဲ။ ကျုပ်လည်း သွားကိုက်ဖူးတယ်။ ကျုပ်မိန်းမကကျုပ်ထပ်
ထက်ဝက်ကျော် ငယ်တယ်။ သူနဲ့စကားများပြီးတိုင်း ကျုပ်မှာသွားကိုက်တော့တာပဲ။ ဟိုသွားကကိုက်သလိုလို၊ ဒီသွားကကိုက်သလိုလိုနဲ့ သရိုးသရီကို ဖြစ်နေတော့တာ။”
ဆရာဝန်ရဲ့အဖြစ်က သူနဲ့တူလွန်းလှပါလား။ သူတအံ့တသြနှင့် ဆရာဝန်ကို ကြက်သေသေစွာ ငေးကြည့် နေမိ၏။ ဆရာဝန်က သူ့အားမကြည့်ဘဲ အိမ်ပြင်ဘက်သို့ မျှော်ငေးလျက် တစ်လုံးချင်း ဆက်ပြောလေသည်။
“ သက်သာမလားဆိုပြီး သွားတစ်ချောင်းကိုက်လိုက် နုတ်လိုက်ပေါ့။ နောက်မှ ကျုပ်ကို တကယ်ကိုက်ခဲစေတာ ပါးစပ်ထဲက သွားမဟုတ်ဘဲ ကျုပ်ဘဝထဲက သွားပါလားဆိုပြီး သိလာတော့တယ်။ သိတဲ့အချိန်မှာ ကျုပ်အသက်က ခြောက်ဆယ်ကျော်နေပြီ။ သွားသစ်လဲဖို့ အများကြီးနောက်ကျသွားခဲ့ပြီ။”
ဆရာဝန်၏အသံက နောင်တသံလား။ မချင့်မရဲသံလား၊ သူဝေခွဲ၍မရ။ ရွှေကိုင်းမျက်မှန်နောက်မှ မျက်လုံးများကတော့ ရီဝေနေသလို ထင်ရလေသည်။
ထိုအချိန်၌ ခြံဝသို့ထိုးဆိုက်လာသော ဆိုက်ကားတစ်စီး၏ အသံကြောင့် ဆရာဝန်ရော သူပါ အိမ်ရှေ့သို့ လှမ်းကြည့်လိုက်၏။ ဆိုက်ကားပေါ်မှ ဆင်းကာ အိမ်ထဲသို့ လှမ်းဝင်လာသော အသက်အစိတ်ကျော် သုံးဆယ်ဝန်းကျင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်။ အသားဖြူဝင်းကာ ရုပ်ရည်ချောမောပြီး ခေတ်မှီလွန်းလှပါသည်။ အမျိုးသမီးက သူ့ကိုရော ဆရာဝန်ကိုပါ တစ်ချက်မှ မကြည့်ဘဲ အိမ်ထဲသို့သာ တန်းဝင်သွား၏။
“ အဲဒါ... ကျုပ်ဇနီးပဲ။”
ဆရာဝန်၏အသံမှာ ဂုဏ်ယူသံလား။ အားငယ်သံလား ဝေခွဲမရပြန်ပါ။ သူဆရာဝန်အား ဖြတ်ခနဲလှမ်းကြည့်ရင်း မေးလိုက်သည်။
“ စိတ်မရှိပါနဲ့ဆရာ။ ဆရာရဲ့သွားတွေ ဘာဖြစ်သွားလဲ။ ကျွန်တော်သိခွင့်ရှိရင် သိပါရစေ။”
ဆရာဝန်က သွားနုတ်သည့် ပလိုင်ယာကို ဆွဲယူ၍ သူ့အနားသို့ လျှောက်လာရင်း ပါးစပ်ဖြဲပြ၏။ ဆရာဝန်၏ ပါးစပ်ထဲ၌ သွားတစ်ချောင်းမှ မရှိတော့။
“ အံပုံစိုက်ဖို့အတွက်လည်း နောက်ကျသွားပြီလေ။ အဲဒီတော့ ဒီအတိုင်းပဲ ထားလိုက်တော့တယ်။ နောက်ပြီး သွားနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ စကားပုံတစ်ခုလည်း ရှိသေးတယ် မဟုတ်လား။ နွားပြာကြီး အောက်သွားမရှိ ဆိုတာလေ။ ကဲ...ကျုပ်တို့ရဲ့ အလုပ်လေး လက်စသတ်လိုက်ရအောင်။ ပါးစပ်...”
ထိုနေ့မှစ၍ နောက်တစ်ခါ သူသွားကိုက်တိုင်း စိတ်ကကိုက်တာလား၊ သွားကကိုက်တာလား သေချာအောင် ခွဲခြားရသည့် အလုပ်တစ်ခု ပိုလာတော့၏။
သူ့ဘဝထဲမှ အရေးကြီးဆုံးသွားကိုတော့ ယနေ့တိုင် သူမနုတ်ဖြစ်သေး...။
တကယ်တော့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ သွားတစ်ချောင်းပဲ။
သူဟာ ကိုက်တတ်တဲ့ သွားလိုမျိုး
ကိုယ့်ကို တဆစ်ဆစ်ဒုက္ခပေးနေတော့တာပဲ။ ။
Posted by witch83 at 2:08 PM No comments:
"ချစ်တယ်"လို့ ခဏခဏပြောဖို့ မနှမြောစမ်းပါနဲ့
ဘာအလွမ်းနဲ့မှ အာပတ်ဖြေလို့ မရဘူး။ ။
ငါတို့ ဘာလို့ အငြင်းပွားနေကြရတာလဲ
(တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်)နားမလည်တာလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့။ ။
ငါတို့ ဘာဖြစ်လို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သံသယတွေ
ငါတို့ ဘာဖြစ်လို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်
မဟုတ်ဘဲနဲ့ကွယ် ။ ။
ဒါ... စစ်တုရင်ထိုးနေကြတာလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ကွယ်။ ။
မင်းငါ့ကို လွမ်းတဲ့အခါ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပါ။
ငါ.. လွမ်းတာကိုလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောမယ်။ ။
"ချစ်တယ်"ဆိုတဲ့ စကားတစ်လုံးကို မကြာခဏပြောဖို့ မနှမြောစမ်းပါနဲ့။
မင်းက စကားမပြောဘဲ ပိတ်ထားရင်
ဘာမှ အသုံးမဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုကို ကိုင်ထားရတာနဲ့
မင်းခိုက်စိုးစန် To Continue Reading
Posted by witch83 at 1:19 PM5comments:
Posted by witch83 at 9:13 PM No comments:
ဖုန်းပြောရင် ဘယ်ဘက်နားကို သုံးပါ။
ကော်ဖီဆို တစ်နေ့ တစ်ခွက်သာသောက်ပါ။
ညနေ ၅ နာရီကျော်ရင် ထမင်းအများကြီးမစားပါနှင့်။
ရေကို မနက်ပိုင်း ပိုသောက်ပြီး ညနေပိုင်း လျှော့သောက်ပါ။
ဟန်းဖုန်း အားသွင်းစက်ကို ခပ်ခွာခွာထားပါ။
ည၁၀ နာရီမှ မနက် ၆ နာရီသည် အကောင်းဆုံး အိပ်ချိန်။
အိပ်ရာမ၀င်ခင် ဆေးသောက်ပြီး ချက်ချင်း လှဲမချလိုက်ပါနဲ့။
ဓာတ်ရောင်ခြည် ပြန့်နှုန်း အဆ ၁၀၀၀ ခန့်ရှိသောကြောင့် ဓာတ်ခဲ အားကုန်သွားသည်အထိ ဟန်းဖုန်းကို မသုံးစွဲသင့်ပါ။
Source; Myanmar Times To Continue Reading
Posted by witch83 at 8:54 AM2comments:
Me and Mom... Though we don't speak out loving...